Warar hor dhac ah oo laga helaayo Shirka Kismaayo. – XAMAR POST
Shirka magaalada Kismaayo ee Xarunta KMG ah ee maamulka Jubbaland kaas oo u dhaxeeyay Madaxda maamul Gobaleedyada ayaa hada toos uga socda Guriga martida ee Kismaayo waxaana hadalka jeedinaya Madaxweynaha Martida loo yahay ee Jubbaland Axmed Maxamed islaam “Madoobe”.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in Soomaaliya ay ka jirto dhibaato dhinac walba leh oo saameysay Guud ahaan Xasiloonida iyo Maamulka Dowladnimada isagoo talooyin dhaxal gal ah u soo jeediyay dhinacyadii shirka ka soo qeyb galay.
“Qof walba oo naga mid ah halkaan ma sii joogi doono laakiin waa in aan ka tagnaa taariikh dhaxal gal ah oo aan ka shaqeynaa samata bixinta Dalka iyo dadka hadii aanan awoodina waa inaan kaga sii darin ” ayuu yiri Madaxweyne Axmed Madoobe.
Xiisaha iyo doodaha ugu badan ee Shirka ayaa maanta toos loo guda galayaa waxaana la filayaa in markii uu dhamaado la soo saaro qodobo ay ku heshiiyeen Madaxda maamul Gobaleedyada.